Drupal ကို Internet ပေါ်တင်ချင်လို့ပါ - MYSTERY ZILLION
မူလ › CMS
Drupal ကို Internet ပေါ်တင်ချင်လို့ပါ
July 2009 edited September 2009 in CMS
ကျွန်တော် Drupal နဲ့ Local မှာ Site တခုရေးထားပါတရ်..
အဲဒါကို Internet ပေါ်ကိုဘယ်လိုတင်မလဲ သိချင်ပါတရ်..
Local မှာ Wamp Server နဲ့သုံးတာပါ
နောက်ပြီး Drupal မှာ User Account အသစ်တခုလုပ်လိုက်ရင်
Account ကို email send နိုင် အောင် SMTP ကို Wamp Server နဲ့
ဘယ်လိုတွဲသုံး ရမလဲဆို တာပြောပြပေးပါ
CMS တွေလုပ်မယ်ဆို online က အဆင်ပြေပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အထဲမှာ သူသိမ်းလိုက်တဲ့အခါ home path ကို localhost လို့သိမ်းမိပြီး နောက်ပိုင်း ပြန်ပြင်ရတာတွေများတဲ့အတွက် အကောင်းဆုံးက online မှာ တိုက်ရိုက် လုပ်တာအဆင်ပြေတယ်။
email send ဖို့ SMTP မလိုပါဘူး။ server မှာ တွေမှာ mail function ပါတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပုံမှန်အားဖြင့် mail() ဆိုတဲ့ function နဲ့ PHP မှာ ရပါတယ်။ သုံးနေကြ hosting တွေအားလုံးက SMTP config လုပ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ localhost မှာဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်လောက်ဘူး။ နည်းနည်း config ပြန်လုပ်ရမယ်။
ကျွန်တော် freehosting တစ်ခုမှာ တင်တာ PHP mail function အလုပ်မလုပ် ဘူးဖြစ်နေတယ်။ Freehosting က support မလုပ်တာလား မသိဘူး။ PHP mail function support လုပ်တဲ့ Freehosting ရှိရင်သိပါရစေ။
blueviruz5 wrote: »
freehosting တော်တော်များများက mail function ကို အလုပ်မလုပ်ပါဘူး
Hosting ၀ယ်မယ်ဆို ဘယ် Hosting ကောင်းမလဲဗျ။ ဖြစ်နိုင်ရင် Unlimited Plan လိုချင်ပါတယ်။
လက်ရှိ lunarpages ကနေ ဝယ်ထားတာ။ supporting ပိုင်းသဘောကျတယ်။ ကိုယ့် server တစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ ဖုန်းလှမ်းဆက်တယ်။ သုံး၇တာ အဆင်ပြေတယ်။ customer supporting ကောင်းတယ်။ စျေးသက်သာပြီး မြန်တာလိုချင်တရင် hostmonster ရှိတယ်။ နှစ်ခုလုံးက unlimited တွေပဲလေ။ အဲ.. CPU usage ကတော့ အများဆုံး 3% , 4% လောက်ပဲရမှာ... share hosting ဆိုတော့..
Is't unlimited for all (disk space, bandwidth, mail. etc..? And Can I know the fees nearly? Thanks.